Kulele kuMpofana ukubambelela noma ukudedela isicoco seligi - Bayede News
Indlela yokuqala ukuthi ifane neLiverpool FC ehlale esicongweni kuligi yase-England kwaze kwaba iyayithatha iba ngompetha
Isinqumo sePremier Soccer League (PSL), sokuthi imidlalo ibuyela enkundleni bekuyinto ekade ifiswa ukuthi yenzeke ngabathandi bakanobhutshuzwayo.
Yize kunjalo kodwa futhi bebebaningi abebethi akuphele ngesizini yangowezi-2019/2020, iligi ithathwe yiKaizer Chiefs okuyiyo esesicongweni kuyimanje.
Ukubuya kwemidlalo kusho ukuthi iChiefs ibhekene nomqansa wokuqeda ishobolo leminyaka emihlanu ingakaze inqobe sicoco. Amakhosi lapha eNingizimu Afrika Ilona qembu elihamba phamili kuleli ngokunqoba izinkomishi.
Njengoba kubuya imidlalo zimbili izindlela zeChiefs, kulezi zindlela kumele inqume ukuthi ithatha yiphi.
Indlela yokuqala ukuthi ifane neLiverpool FC ehlale esicongweni kuligi yase-England i-English Premier League (EPL) kwaze kwaba iyayithatha. Lokho kwenzeka nje besekuphele iminyaka engama-30 iLiverpool FC (iThe Reds) yagcina ukunqoba lesi sicoco.
IThe Reds ithatha iligi nje kusasele imidlalo, emihlanu ngaphambi kokuthi igoqwe isongwe isizini. Ayifunanga ukuthi iphindwe iphutha elayehlakalela ngesizini edlule ihlulwa ngephuzu elilodwa yiManchester City ukuze inqobe iligi.
Indlela yesibili ile ethathwe iFC Barcelona egijima kuligi yaseSpain iSpanish La Liga. Kufanele ingabe iyona ezihola phambili kuleliya lizwe kodwa yalahla amaphuzu nokuyenza ilale endaweni yesibili emva kweReal Madrid.
IChiefs nayo uma ingalahla amaphuzu ingafana neFC Barcelona igcina izibona isilele endaweni yesibili kulogi njengoba ihlezi iMamelodi Sundowns ezithendeni. La maqembu ahlukaniswe ngamaphuzu amane kuphela kulogi.
IChiefs inamaphuzu angama-48 iSundowns yona ibe nangama-44 nomdlalo owodwa olengayo.
Ngaphambi kokuthi uHulumeni amemezele ukuthi ukumiswa kwezemidlalo, iChiefs yalahla amaphuzu amathathu ihlulwa AmaZulu FC ngegoli elilodwa eqandeni nelavalelwa phakathi uBongi Ntuli.
Emdlalweni eyisi-7 esalele iChiefs ngaphambi kokugoqwa kweligi izobhekana neBidvest Wits ezodlala nayo kabili, iPolokwane City, iStellenbosch, iChippa United, iBloemfontein Celtic kanye nayo iSundowns imbala.
Kushone usuku lwangoLwesibili leli qembu lasePhefeni selimemezele ukuthi abadlali abathathu balo ngeke ivuselelwe inkontileka yabo. Labo badlali nguGeorge Maluleka osezobonakala kuSundowns emva kokusayina iminyaka emithathu kuyona, uKabelo Mahlasela ogijima kuPolokwane City noJoseph Molangoane obesekuphele isikhathi eside engadlali emva kokulimala kanzima.
IChiefs iveza lezo zindaba nje iphinde yavuselela inkontileka kaBrylon Petersen ongunozinti, uPhilani Zulu noSiphelele Ntshangase.
UNtshangase okwakhe kushiye imibuzo eminingi kwabaningi ukuthi ivuselelwa kanjani inkontileka yakhe ekubeni ijezi elizwa ngendaba. Isikhathi esiningi usuke ehlezi nabalandeni uma iChiefs idlala.
U-Ernest “Mazinyo” Middendorp oqeqesha leli qembu uma engagcina ngokunqoba iligi ngabe ulifezile iphupho lezikhulu zaleli qembu.
Ngesikhathi eqashwa kungekhona okuqala uMiddendorp ethatha izintambo kuGiovanni Solinas, kwathiwa kumele umsebenzi wakhe ukuletha izinkomishi kuleli qembu. USolinas wathatha izintambo kuSteve “Mphathi” Komphela, naye owahluleka ukuletha neyodwa inkomishi.
Umqeqeshi owagcina ukunqobela leli qembu izicoco uStuart Baxter, owathatha iligi ngesizini yangowezi-2014/15. Akagcinanga lapho wanqoba neNedbank Cup kulandelana nonyaka wezi-2016 nangonyaka wezi-2017.
Emidlalweni esele Izimpofana zizoqhubeka nokubeka amathemba azo kuDaniel Akpeyi obukeka ezibambe kahle izintambo emapalini, uLebogang Manyama osemathubeni okuqokwa njengabanye abavelele kule sizini kube uSamir Nurkovic oseshaye amagoli ali-11 ku-Absa Premiership kuphela.
Kwamanye amaligi amaqembu asheshe asebenza kusakhanya, iBayern Munich yaseGermany ithathe iligi kusasele imidlalo engaphezulu kwemihlanu, iqembu elisemathubeni okuthi libe ngompetha iJuventus egijima kwiSeria A okuyiligi yase-Italy.
Yize ingaphelanga iligi yaseFrance iFrench 1 ngenxa yoKhuvethe kodwa iParis Saint-Germain (PSG) ibe ngompetha bakule sizini.
IChiefs isicoco se-Absa Premiership iyona nto esele kule sizini engayinqoba, kwazise inkomishi esasele iNedbank Cup kuphela nakuyo eseyawashiswa ijezi. Amaqembu asele kuyona iNedbank Cup iSundowns, iBidvest Wits, iCeltic neBaroka FC.
AMakhosi, okuyigama iChiefs eteketiswa ngalo, uma engagcina ngokuyinqoba le ligi esingeke isabizwa nge-Absa Premiership ngesizini ezayo kobe kusho ukuthi isiyinqobe amahlandla amahlanu ilandela iSundowns esiyinqobe kayisi-9.
nguSabelo Maphumulo Jul 6, 2020